2.3 I- # 3: Imikhiqizo Iyaphathwa futhiephphile
2.4 # 4: Imali engenayo ye Passive
3.1 I-vara hugmynd # 1: rafbækur / Amabhuku
3.2 I-vara hugmynd # 2: I-Webinars / Izifundo ze-Inthanethi
3.3 I-vara hugmynd # 3: Markþjálfi / ráðgjöf
3.4 Umkhiqizo we-Hugmynd nr. 4: Ubuciko Bezandla & Ubuciko
3.5 Umkhiqizo we-hugmynd # 5: Imidwebo Ehlanganisiwe & Izinto Zokwakhiwa Kwewebhu
Okuthunyelwe okuxhasiwe kukuhle ukufunda ukuthi ungasebenza kanjani futhi ubonise umkhiqizo, kodwa amakhasimende abhekeke angafuni ukubona okuningi kulawa kubhulogi yakho (i-20% exhasiwe ku-80% engaxhasiwe ibhekwa "kuhle"), futhi ayifuni ukubona izethulo zokuncintisana. Okuthunyelwe okuxhasiwe kungase kungabuyiseli ukubuyisa okukhulu ngesikhathi sakho sokutshalwa kwezimali. Þú getur notað $ 100 $, þú þarft að nota amahorau notkunarskilaboð, meira en $ 20 $ fyrir $ 20.000. Umzamo kungenzeka ukuthi awufanele ukukhokha.
Nakuba akudingeki ulahle amaphrojekthi afana nalawa, ukuthengisa imikhiqizo yakho kuzonikeza umthombo ongcono wemali engenayo. Nasistinn izinzuzo:
Umkhiqizo wakho ungaba isikhathi eside noma esifushane njengoba udinga, ungaba nemininingwane auka kakhulu, ingahle ibuyekezwe njengoba ubona kufanelekile, noma ungadala izinguqulo ezintsha ngokusekelwe ekubukeni kwezilaleli. Futhi kuye ngokuthi uhambisa kanjani umkhiqizo wakho, uzoba nokulawula amanani futhi ugcine iningi noma yonke inzuzo.
I- # 3: Imikhiqizo Iyaphathwa futhiephphile
# 4: Imali engenayo ye Passive
Ubuchwepheshe bakho bungakuseta kahle kakhulu ukuze uthengise izinhlobo ezithile zezinto. Uzodinga ukugxila endaweni lapho unesipiliyoni khona futhi wakhe umkhiqizo ozungeze amakhono akho neischich: ukuba ngumzali, ukupheka, ukwenza isikole, njll.
I-vara hugmynd # 1: rafbækur / Amabhuku
I-vara hugmynd # 2: I-Webinars / Izifundo ze-Inthanethi
I-vara hugmynd # 3: Markþjálfi / ráðgjöf
Umkhiqizo we-Hugmynd nr. 4: Ubuciko Bezandla & Ubuciko
Umkhiqizo we-hugmynd # 5: Imidwebo Ehlanganisiwe & Izinto Zokwakhiwa Kwewebhu
Ababhulogi abaningi bafunda banothando lokuchofoza ikhodi noma ukuklama ihluzo. Nota má WordPress þemu sem ekki eru neytt af WordPress þemum, en þú þarft ekki að nota það. Uma unama-kunnátta, ungacabangela amasayithi wokwakha kusukela ekuqaleni noma umklamo we-logo. Lezi zinketho zidinga izinga eliphakeme lamakhono, ngakho-ke uqeqesha okuningi ngangokunokwenzeka og gagnleg notkun erofthiwe yezobuchwepheshe uma ungakwazi ukuyikhokhela.
Uma usukhethile umkhiqizo omuhle we-sess yakho kanye nesethi yakho yamakhono, uzodinga ukuthola ukuthi uzothengisa kanjani umkhiqizo wakho.
Ukusebenzisana kuyindlela auka yokwenza izwi lilalele izilaleli ezinkulu futhi linikeze izinketho eziningi. Amanye imibono yobudlelwane ibandakanya umklami wewebhu osebenza nomdwebi odwebayo, i-blogger yomsebenzi osebenza nomphathi wezokuxhumana, noma umqeqeshi wempilo esebenza nomuntu othengisa izithako zezempilo. Ungase futhi uthenge umkhiqizo wakho ngokusebenzisa amabhulogi amakhulu amakhulu ngokusetha uhlelo lokubambisana olunikeza iphesenti yokuthengisa njengesikhuthazo.
Izindlela ezifanayo zokuthengisa zisebenza njengokubhalisa: thola imakethe yakho ehlosiwe, yakha umlenze oholayo kanye nekhasi lokufika futhi wakhe uhlu lwakho lwe-imeyili. Ibhulogi yakho isheshayo ithuluzi lokumaketha kodwa gcina izwi lakho futhi usebenzise sess efanayo, ngenkathi ususa umkhiqizo wakho kokuqukethwe kwakho.